3 Zvinhu zvekufunga neGoogle Chinyorwa Ad Shanduko | Martech Zone
Google's akawedzera mavara kushambadza (ETAs) vanorarama zviri pamutemo! Iyo nyowani, yakareba nhare-yekutanga shambadziro fomati iri kuburitsa kunze kune ese madhizaini padhuze neiyo iripo desktop-inowirirana standard ad fomati - asi chete kwenguva iyo iripo. Kutanga Gumiguru 26, 2016, vashambadziri havachakwanise kugadzira kana kurodha zvakajairika zvinyorwa zveshambadziro. Pakupedzisira, kushambadzira uku kunozopera muzvinyorwa zveyakabhadharwa nhoroondo yekutsvaga uye kutsakatika kubva pane rako rekutsvaga peji peji zvachose.
Google yakapa vashambadziri chipo chavo chikuru kusvika parizvino: 50 muzana imwe yekushambadzira kopi nzvimbo uye mamwe mavara ekutsanangura zvigadzirwa zvavo nemasevhisi. Asi kana iwe ukarasa uyu mukana, zvinokubhadharira iwe muhombe sezvo vakwikwidzi vanoshandisa iyo nguva kunyora kushambadza mune iyo fomati nyowani, kuvaedza, uye kugadzirisa maitiro avo eSEM. Nenguva yakatarwa yeGoogle ichikurumidza kusvika, vashambadziri vanofanirwa kuenda kubasa kunyora kushambadzira kuripo nekukurumidza kuti varambe vachikwikwidza mune yekushambadzira nzvimbo yekutengesa.
Isu tanga tichinyatsoteerera maETA kubvira Google payatanga beta kumashure muna Chivabvu. Vanopfuura chetatu chevatengi vekambani yangu vatove kuyedza ETAs mu50 muzana emaakaundi avo. Hezvino zvinhu zvitatu zvatakadzidza izvo zvichakubatsira iwe paunenge uchivaka yako yega zano.
1. Fungisisa zvako zvese zvekusika
Kusanganisa pamwe ako aripo ekutsanangura mitsara uye zvisina tsarukano kukanda Kutakurirwa mahara mumusoro wako wechipiri uri kuyedza, kana kungo zadza nzvimbo nyowani nevamwe vatambi, asi haisi mhinduro. Isu takatoona vashambadziri vachiita izvi uye takatarisa sematanho-kuburikidza nemitengo inodonha nekushandisa iyo nzvimbo yekuzadza zano. Kuwedzera kopi kumagumo emusoro wenyaya pasina kutora iyo meseji uye mhando mukutarisisa hazvireve kuti kushambadza kuchave nemusoro kana kutyaira kubaya.
Ini ndichadzokera kuna Google Director weKushanda Ads Kushambadzira Matt Lawson uyo akati:
Shandisa iyi yekuvandudza semukana wekutarisazve yako yese yekugadzira. Uyu mukana wekugadzira chimwe chinhu chitsva uye chinomanikidza kupfuura nakare kose.
Funga mukana pane kunetseka.
2. Usarega kushambadzira kwako kwekare ipapo
Sezvo nezvose zviri mukutsvagwa kwakabhadharwa, nekuda kwekuti kuwedzerwa mameseji kushambadza kutsva hazvireve kuti vachakunda shambadziro dzako dzekare kubva pabhati. Mhanya maETA ako matsva padhuze neshambadziro dzekare. Kana shambadziro yako yakajairika iri kukunda maETA, tarisa kuti ndeapi mazano ekutumira mameseji ari kushanda uye kugadzirisa iwo ari mumhando yeETA.
3. Tanga kufunga nezvezororo
Mwaka wezororo mutyairi mukuru wemari mukushambadzira kwekutsvaga. Izvo zvakare zvinoshamisa kushupika uye kunotora nguva kune zvikwata zvemukati kugadzirisa kukwidziridzwa uye kunyora kopi yekushambadzira yezororo pachiyero. Kana iwe uchida kutora mukana wemadhora mazhinji mwaka uno wezororo, zvirinani kuti zano rako reETA rishande nguva refu nguva yakatarwa yeGoogle isati yasvika. Gadzirira yako yemukati timu izvozvi.
Kuedza nehurefu hwemunhu
Yedu yekutanga beta bvunzo inoratidza kuti marefu maETA ane zvirinani kubaya-kuburikidza nemitengo (CTR) paavhareji, asi maitiro anogona kusiyana neakaunzi. Hezvino izvo zvatakadzidza kuyedza musoro wenyaya kureba pane beta vatengi account.
[bhokisi mhando = "info" align = "aligncenter" kirasi = "" width = "90%"]
Hunhu Kureba mune Misoro CTR *
* Maringe neavhareji ETA yekudzvanya-kuburikidza chiyero pane Boost beta mutengi maakaunzi
Google ine zvinopfuura mabhiriyoni mapfumbamwe kushambadza kwainogona. Chokwadi, mamwe akagadzirwa nematemplate saka huwandu hweakasiyana ma ads ishoma, asi isu tichiri kutaura nezveku nyorazve mabhiriyoni eshambadziro zvisinei kuti unozvicheka sei. Google haina kupa pachena rubatsiro kune vanoshambadza kuti vagadzirise nyaya iyi. Huwandu hwakakosha hwekunyorazve hunodiwa zvisinei nekuti vangani vakasarudzika kana templated vashambadziro pamhepo vashambadziri vanoshandisa mumisangano yavo. Kana usati watanga kugadzirira, hapana nguva senge iripo. Kumirira kusvika mangwana kunogona kunonoka.
Tags: chinyorwa chemashokowedzerakukurudzira midhiyactrEtaakawedzera mavara kushambadziragoogle adwordsmusoro wenyaya nzvimbo yekuzadzakubhadhara pakukandappcppc agencypc ctrnzvimbo yekuzadzanzvimbo yekuzadza zanochinyorwa ad
Tim Krozek ndiye CEO we Wedzera Media, inotungamira yedhijitari kushambadzira yemusika.
Asati asimudzira Boost Media, Krozek aive nebasa reEquired Frontier yepasirese mari uye vatengi kutsvaga. Akabatsira kukura iyo yekutanga-15-timu timu kune vashandi ve220 uye anopfuura madhora makumi mana emamiriyoni mumari. Frontier inoshanda yaizowanikwa neAdobe (NASDAQ: ADBE). Akamhanyisawo Support.com kutengesa kwepasirese uye kusimudzira bhizinesi, manejimendi chirongwa, uye vatengi mabasa. Akazo maneja Flite.com yekutsvagisa mari yekushambadzira yayo brand, agency uye mubhizimusi rekuparadzira.
Sep 14, 2016 na12: 00 PM
Zvakanaka kutumira! Iwe unoti izvo> 135 misoro misoro inoita zvirinani. Asi kana muganho uri 30 - 30, unosvika sei pa135?